KDE Batanidza yeIOS ikozvino inogona kuedzwa kuburikidza neTestFlight | Linux Addicts
Hapana kutamba, KDE Connect yasvika paIOS uye ikozvino inogona kuedzwa kuburikidza neTestFlight
pablinux | 13/11/2021 14:39 | Noticias
Apple haizivikanwe pasi rese nekugadzira yakavhurika-kune-zvese software. Muchokwadi, nzira yake yekudzikamisa multitasking yakaita kuti webhu vhezheni yeWhatsApp itore nguva kushanda padivi peiyo iPhone. Kuisa maapplication akaita seKodi pane nharembozha yavo zviri pamutemo, isu hatitombotauri. Chakanga chisipo zvakare chaive chimwe chinhu chekuwiriranisa iPhone kana iPad nekombuta yeLinux, asi chatova chinhu chekare, kubvira. KDE Connect yasvika paApp Store.
Zvakanaka, kwete, kwete App Store. PaIOS unogona kuyedza beta software, asi isu tinofanirwa kuiisa kuburikidza Kwayedza. Nhasi ndazoziva nezvekumhara uku, ndatokwanisa kuzviyedza uye ndine chakabatana nemalaptops angu maviri, ese ane Plasma senzvimbo ine graphical, uko KDE Connect inofanoiswa. Zvino, ani nani anofunga kuti zvichafanana nekuishandisa pamwe chete neMacOS, kanganwa nezvazvo.
1 KDE Unganidzo inobvumidza iwe kudzora Linux kubva iOS
2 Ungabatanidza sei iPhone kana iPad neLinux
KDE Unganidzo inobvumidza iwe kudzora Linux kubva iOS
Zvatingaite nhasi neiyo iOS vhezheni yeKDE Connect ndeyekuti:
Tumira zviri mukati me clipboard.
Tumira mafaira. Parizvino, tinorangarira kuti iri mubeta, hapana chinogona kutumirwa chisiri mu "Files" app yeIOS / iPadOS.
Remote presentation control.
Ita murairo. Usati waita izvi, unofanirwa kuzvigadzirisa muKDE Batanidza pakombuta yakabatana. Kana isu tisina, iyo iPad / iPhone rondedzero haina uye, pakusarudza sarudzo, hwindo rinovhura pakombuta kuti rigadzire.
Dzora komputa uri kure. Isu tichadzora chinongedzo, ndiko kuti, isu tichashandura iPhone yedu kana iPad kuita pani yekubata. Zvichida mune ramangwana vachawedzerawo keyboard.
Ungabatanidza sei iPhone kana iPad neLinux
Asi isu hatizokwanisa kuita chero chepamusoro kana tikasabatanidza michina. Kuti tiite izvi, tichatevera matanho aya:
Takatora TestFlight kubva kuApp Store.
Ipapo tinobaya pamusoro Iyi link. Iko kukokwa kuti tibatane nesu mukuyedza software.
Isu tinoisa KDE Connect.
Isu tinoita shuwa kuti tine nharembozha uye komputa pane imwechete network.
Isu tinovhura KDE Batanidza pane yedu iPhone kana iPad.
Kana komputa yedu isingaratidzike muchirongwa, tinodzvanya pamadotsi matatu kumusoro kurudyi tobata pakanzi "Refresh Discovery". Nekuti hongu, zviri muChirungu chete.
Isu tinosarudza zita rechikwata chedu nekudzvanya pariri kuti titange pairing.
Muhwindo rinobuda, tinya "Pair".
Pakupedzisira, tinoenda kune chiziviso chakaonekwa pakombiyuta yedu uye tinobvuma. Iko kubatwa kwapfuura kunoonekwa kana tabata pazita remudziyo wakabatana.
KDE Connect yanga yatove inowanikwa kune macOS kwechinguva, asi chatinogona kushandisa kare ndeye vhezheni yeIOS / iPadOS yekubatanidza neLinux. Zvinoshamisa, asi kwete zvakanyanya kana isu tichifunga kuti KDE iri kuseri kweizvi. Kana iwe uine uye uchida kuenderera ne iPhone yako neLinux, zvinhu zvave nyore zvishoma.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Hapana kutamba, KDE Connect yasvika paIOS uye ikozvino inogona kuedzwa kuburikidza neTestFlight
Twister OS ndiyo yakanakisa sisitimu yekushandisa yaunogona kushandisa paRaspberry Pi yako, uye inouya neRetroPie uye misoro yakaiswa nekusarudzika.